1.Driver ရှာရခက်နေတဲ့သူတွေအတွက် DriverFinder Pro|2.Driver Easy Pro |3. ကွန်ပျူတာ Driver များ ယူရန်လိပ်စာ|4.Driver Genius Professional 11.0 ~ ITmanHOME
08:47 Driver Total, နည်းပညာ No comments
1.Driver ရှာရခက်နေတဲ့သူတွေအတွက် DriverFinder Pro|2.Driver Easy Pro |3. ကွန်ပျူတာ Driver များ ယူရန်လိပ်စာ|4.Driver Genius Professional 11.0
Driver ရှာရခက်နေတဲ့သူတွေအတွက် DriverFinder Pro 2.1.0.0
DriverFinder Pro 2.1.0.0
ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း ဘယ်လောက်မှမရှိပါဘူး 1.3 MB ထဲပါ
ဒါကိုတော့ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘာတွေလုပ်တဲ့ဆောစ့်ဝဲလ်ဆိုတာ တော်တော်များများသိမှာပါ
Driver တွေကို updaet လေးပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
လိုအပ်တဲ့ Driver ကိုလည်း scan လုပ်ပြီး ယူလို့ရပါတယ်
ကွန်ပျူတာ Driver များ ယူရန်လိပ်စာ
ဒါကတော့ အကိုတစ်ယောက်က မေးတာနဲ့ ကျွန်တော် ဒေါင်းပြီးတော့လည်း ပြန်မတင်ပေးချင်ပါဘူး
ကိုယ်တင်ပေးတာနဲ့ သူများစက်နဲ့ မကိုက် တဲ့အခါဆို သူလည်းပင်ပန်းကိုယ်လည်း ပင်ပန်းဖြစ်မှာဆိုးလို့
ကျွန်တော် လိပ်စာနှစ်ခု ညွန်းပြချင်ပါတယ် အများကြီးရှိပါတယ် အဲဒီအထဲက ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ
ကိုယ့်ရဲ့စက် အမျိုးစားကိုရွှေးပြီး Download လုပ်နိုင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ စက်မှာလိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို အလွယ်တကူရှာပေးတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ
http://www.driverguide.com/ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စက်မော်ဒယ် တွေကို ရွှေးပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်
အရင် ပို့စ်တုန်းက အဆင်မပြေလို့ ပြန်တင်ပေးတာပါ
သူကတော့တော်တော်များများသိမှာ မိမိစက်ထဲ Driver တွေကို updaet လေးပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
Patch Download>>>http://www.mediafire.com/ (or)http://min.us/
Patch ဖြည့်နည်းကတော့ C ဖိုင်ရဲ့ Driver Genius Folder ထဲကို ကူးထည့်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်
Credit to http://www.amyokaungtarr.com/2012/07/website-facebook.html